Shiinaha L-Phenylalanine CAS 63-91-2 loogu talagalay soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Pharma Grade (USP) | Salaad
Magaca Badeecada: L-Phenylalanine
CAS MAYA.: 63-91-2
L-Phenylalanine (Abbreviated Phe) waa amino acid muhiim ah waana qaabka kaliya ee phenylalanine ee laga helo borotiinada. Waa mid ka mid ah 18ka amino acids ee caadiga ah, iyo mid ka mid ah siddeed amino acids oo muhiim u ah jirka aadanaha.
Maaddaama kaabayaasha nafaqada ， L-phenylalanine loo arki karo koox benzyl ah oo lagu beddelay kooxda methyl ee alanine, ama koox fenyl ah oo ku jirta meeshii haydrogenta alanine-ka ah. Inta badan jirka waxaa sameeya oksidayn fenylalanine hydroxylase catalysis oo lagu galiyo tyrosine, iyo isku dardaro leh tyrosine neurotransmitters iyo hoormoonno, si looga qeybqaato dheef-shiid kiimikaadka jirka iyo sonkorta.
L-phenylalanine waa bioactive aromatic amino acid. Waa amino acid lagama maarmaan ah oo aan dad iyo duunyadu iskood isu soo saari karin. Waa lagama maarmaan in qofku qaato 2.2g L-phenylalanine maalin kasta. Sida mid ka mid ah sideed amino acids lagama maarmaanka u ah jirka bini'aadamka, waxaa si ballaaran loogu isticmaalay daawooyinka iyo warshadaha lagu daro cuntada. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cirbadeynta amino acid. Warshadaha wax soo saarka cuntada, L-phenylalanine ayaa lagu dari karaa cuntooyinka rootida. Iyo nafaqada phenylalanine waa la sii wanaajin karaa iyo amido-karboksylation leh glucide.
L-phenylalanine waxay sare u qaadi kartaa cunnooyinka carafta waxayna haysaa isku dheelitirka asiidhyada amino ee lagama maarmaanka ah. In warshadaha dawooyinka, L-phenylalanine waxaa loo isticmaalaa sida dhexdhexaad ah qaar ka mid ah dawooyinka amino anticancer sida formylmerphalanum iyo iwm. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro adrenalin, thyroxin iyo melanin. Codsi kale oo muhiim ah ayaa ah in lagu sameeyo aspartame leh L-aspartic acid.
L - phenylalanine waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu daro cuntada muhiimka ah - macaanee Aspartame (Aspartame). Maaddaama ay tahay mid ka mid ah asiidhyada amino ee jirka ku jira, L-phenylalanine waxaa inta badan loo isticmaalaa ku shubista amino acid iyo daawooyinka amino acid ee warshadaha dawooyinka.
Kiristaalo cad ama budada kareemka ah
Hore: L-Leucine CAS 61-90-5 Fasalka Cuntada (AJI USP)
Xiga: L-valine CAS 72-18-4 ee Fasalka Farmashiyaha (USP)
Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Fasalka L-Threonine Pharm, Fasalka Cuntada L-Threonine, Nafaqada xoolaha, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine,